Fumana iinkampani eziNdwendwela indawo yakho Martech Zone
Kule veki kufuneka ndiye kumboniso omnandi Umsinga weDemandbase?. Ukusasazeka kweDemandbase yi I-Adobe AIR Isicelo esikuvumela ukuba ujonge ukugcwala kwewebhu ngexesha langempela
UDavid Lieberman, usekela-Mongameli woPhuhliso lweShishini uchaza uMsinga weDemandbase:
I-Demandbase Stream sisicelo sokuqala seWebhu esingenasikhangeli esenza ukuba abantu bathengise kwaye bathengise ukuze bafumanise ukuba ngawaphi amashishini atyelelayo iWebhusayithi yabo, zithini iimfuno zabo, kwaye ngubani onokunxibelelana naye. Ngokukhuphela ifayile ye khulula Umsinga weDemandbase? Isixhobo kunye nokusiqhagamshela kwiWebhusayithi kunye nakwiDemandbase Direct ?, nabani na onokuthi ajikeleze ukutyelelwa kweWebhu kungenzi intengiso.
Ukusuka kwitikiti elibaleka kubasebenzisi bedesktop banokujonga ulwazi lweshishini, iinkcukacha zenkampani, kunye noqhakamshelwano ekucetyiswa ngalo ngemizuzu. Abasebenzisi banokuseta nokukhetha ukucoca izithuthi ezivela ngaphandle kwendawo yokuthengisa okanye kwiiNkonzo ze-Intanethi (ii-ISP's).
Oku kuyitshintsha ngokwenene imboni! Ukuba ungumthengisi osebenza nge-B2B, ubukwazi ukubona ezo nkampani zibhalise kwindawo yakho ngeFowuni yokuSebenza (iphepha elimhlophe lokukhuphela, iwebhsayithi, njl. Njl.) Kunye nezinye iindwendwe zazingaziwa. Ngale teknoloji, unokubona ukuba ngubani okwindawo yakho ngexesha lokwenyani!
Inguqulelo yePro inomdla ngakumbi, ukulandela umkhondo kunye nokwenza ukuba ukhuphele idatha ye-firmagraphic! Thetha ngomvelisi okhokelayo. Nangona bengakhange bakunikeze ngolwazi lwabo, oku kuya kwenza ukuba ukwazi ukunxibelelana nenkampani ukuze ubone ukuba bafuna olunye uncedo. Oku ekugqibeleni kuya kukhokelela kwintengiso eyandisiweyo!
tags: Ukuthengisa ibluetoothYogbyindawo yendawo yedigbyUvavanyo lwe-beta lwe-iphoneiselfowuni yendawoindawo yaziMari Smithuphawu lokubekisa lwentlaloilifu lethegi
Ngomhla wama-19 ku-Disemba 2008 ngo-6: 53 PM
Isixhobo esitsha esihle. Isiseko seshishini lethu esijolise kwamanye amashishini, ke oku kunokuba luncedo ngokwenene. Kubonakala ngathi kuya kuba kuhle "ukufudumeza" izikhokelo ezibandayo.